Xaaladii ugu adkeyd oo caawa ka taagan Deegaanka Tukaraq iyo ciidamada labada dhinac ee Puntland iyo Somaliland oo dhaqaaqyo sameeyey. – PUNTLANDTIMES- KA DHIGO ISHA WARARKA EE CAALAMKA & SOMALIA
Home 2018 January W.Gudaha, Wararka Maanta Xaaladii ugu adkeyd oo caawa ka taagan Deegaanka Tukaraq iyo ciidamada labada dhinac ee Puntland iyo Somaliland oo dhaqaaqyo sameeyey.
Xaaladii ugu adkeyd oo caawa ka taagan Deegaanka Tukaraq iyo ciidamada labada dhinac ee Puntland iyo Somaliland oo dhaqaaqyo sameeyey.
TUKARAQ(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey oo caawa warsidaha Puntlandtimes.com kasoo gaaraya deegaanka Tukaraq oo ay isku horfadhiyaan ciidamada Puntland & Somaliland ayaa sheegaya in ay xaaladdu caawa kacsan tahay waqti walibana la filan karo in dagaal uu qarxo.
Cutubyo kamid ah ciidamada labada dhinac ayaa saacadihii ugu dambeeyey kusii qulqulayey jiidaha, waxaana taasi ay kordhisay cabsida Shacabka ee ah in lagu dul-dagaalamo.
Maamulada labada dhinac ee Puntland & Somaliland ayaa Hanjabaadaha ay iskugu jeedinayaan ay kordheen saacadihii ugu dambeeyey, waxayna labada dhinacba u muuqdaan kuwa u diyaar garoobay dagaal dhameystiran.
Labada dhinac ayaa sameeyay galabnta dhaq- dhaqaaqyo xoog leh waxa ayna ka durkeen saldghigyadii ay xalay ku hoydeen iyadoo ay taagan tahay xaalad ay si toos ah ay ugu dagaalami karaan .
Goob joogayaaal Puntlandtimes la hadlay ayaa sheegay in tikanadii ugu fara badneyd ay soo gaareen goobaha ay joogaan kuwaas oo ay leeyihiin labada dhinac ayna gaarayaan in ka badan 200 oo baabuurta dagaalka ah
Madaxweynaha Puntland oo la hadlayey xalay abaare 10-kii habeenimo saxaafadda ayaa sheegay in uu yahay duulaanka Somaliland mid garab siinaysa kooxaha Argagixisada, loogana soo horjeedo horumarka Puntland.
Taas bedelkeedana wuxuu sheegay in ay uga jawaabi doonaan talaabo ku haboon, taas oo ka dhigan in ay Puntland weerar iskaga difaaci doonto talaabada uga timid dhinaca Somaliland.
Baarlamaanka Somaliland oo fadhi deg deg ah yeeshay ayaa isku raacay in goobaha aysan dib uga soo laaban ciidamada maamulkaas, taas oo ka dhigan in dhankoodana ay udiyaar noqdeen dagaal cusub.